Naghachi iPhone Ndi ana-akpo - 2 Ụzọ naghachi Ndi ana-akpo si iPhone
Echefuola kọntaktị niile na gị iPhone? Nke ahụ bụ n'ezie a nro, ma unu adịghị mkpa ịdị na-egwu. Nke a iPhone kọntaktị mgbake software-enyere gị aka naghachi ehichapụ iPhone kọntaktsị na ụzọ abụọ. Na-agụ na ịmụta ngwọta n'okpuru.
iPhone 6s (Plus) / iOS9 Ndi ana-akpo Iweghachite Software
3 ụzọ naghachi kọntaktị site na iPhone 6s Plus / 6s / 6 Plus / 6 / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS!
Weghachite kọntaktị gụnyere nọmba, aha, ozi ịntanetị, ọrụ utu aha, ụlọ ọrụ, wdg
Na-akwado iPhone 6s, iPhone 6s Plus na ọhụrụ iOS 9 n'ụzọ zuru ezu!
Naghachi data furu efu ruru nhichapụ, ngwaọrụ ọnwụ, jailbreak, iOS 9 nweta nkwalite, wdg
Selectively ịhụchalụ na-agbake ọ bụla data ị chọrọ.
1: Naghachi kọntaktị site na iPhone
2: Naghachi kọntaktị site na iTunes
3: Naghachi kọntaktị site na iCloud
Nkebi nke 1: Kpọmkwem iṅomi ma naghachi kọntaktị site na iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS
Prekondishion: Ị mkpa ka gị iPhone na aka, na ọ bụ na nkịtị were. Gịnị gị mkpa: Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (a Windows ma ọ bụ Mac version)
Kwụsị eji gị iPhone na nri oge mgbe ị na-ehichapụ kọntaktsị na ya, n'ihi na a mma ohere nke mgbake. Wee wụnye-agba ọsọ ahụ software na kọmputa gị. Ị nwere ike naghachi ehichapụ kọntaktị site na iPhone na ya na 2 nzọụkwụ: iṅomi, ifiọk & naghachi.
Banyere Wondershare Dr.Fone maka iOS: The ụwa mbụ iOS data mgbake software ihe onwe onye ọrụ, na-enyere gị iji naghachi ehichapụ kọntaktị, ozi, photos, videos, ndetu, na-akpọ ihe mere eme, olu memos na na si dị iche iche iDevices. Ọ bụ kpam kpam nchebe, mfe iji na irè.
Jikọọ gị iPhone-agba ọsọ ahụ Wondershare Dr.Fone maka iOS omume na kọmputa gị. Mgbe ahụ ị ga-ahụ isi window dị ka ndị a. Nanị pịa na Malite iṅomi button iji nweta ya scanned.
Nzọụkwụ 2. Preview na-agbake iPhone kọntaktị
Mgbe Doppler, ị nwere ike ihuchalu niile hụrụ data tupu mgbake. Họrọ Ndi ana-akpo ka ịhụchalụ, kanye ya akara na pịa Naghachi.
Part 2: Naghachi iPhone kọntaktị site na iTunes ndabere
Prekondishion: Ị mkpa ka gị iPhone synced na iTunes n'ihu gị ehichapụ kọntaktị. Gịnị gị mkpa: iTunes, (nhọrọ: Wondershare Dr.Fone maka iOS)
Ị nwere ike iweghachi gị iPhone kọntaktị site na iTunes ndabere na ụzọ abụọ: kpọmkwem weghachi dum ndabere site iTunes, ma ọ bụ selectively naghachi kọntaktị site na nkwado ndabere na mpaghara site Wondershare Dr.Fone maka iOS. Ị nwere ike ịhọrọ otu kacha adabara gị.
Devices akwado N'ihi na ihe niile iPhones (iPhone 6s Plus na iPhone 6s na-gụnyere) N'ihi na ihe niile iPhones
1) Iweghachi dum ndabere si iTunes
Gbanyụọ akpaaka mmekọrịta mbụ, na-egbochi gị iPhone si syncing na-akpaghị aka:
N'ihi na Windows ọrụ: Gbaa iTunes, na-aga <Dezie <Mmasị ... <Devices.
N'ihi na Mac ọrụ: Gbaa iTunes, na-aga <iTunes <Mmasị ... <Devices
Mgbe ahụ jikọọ gị iPhone na kọmputa. Gaa na "Devices" ọzọ, họrọ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ gị iPhone na pịa na "Weghachi" button. Mgbe weghachi zuru ezu, gị iPhone ga Malitegharịa ekwentị na ndị niile na kọntaktsị na nkwado ndabere na mpaghara bụ na gị na iPhone ugbu a.
2) selectively agbake iPhone kọntaktị site na iTunes ndabere
Nzọụkwụ 1. iṅomi nkwado ndabere na mpaghara faịlụ
A ga-enwe a ndepụta nke ndabere faịlụ egosipụta, mgbe ị pịa naputa site na iTunes ndabere File n'elu nke usoro ihe omume si window. Họrọ onye na maka gị iPhone na pịa Malite iṅomi.
Nzọụkwụ 2. Preview na-agbake gị iPhone kọntaktị
The Doppler na-ewe gị ole na ole sekọnd. All ọdịnaya si ndabere faịlụ a ga-egosipụta na nkọwa. I nwere ike ịgụ ha niile. Mgbe ahụ ego igbe n'ihu ihe ọ bụla ihe na ị chọrọ, pịa Naghachi bọtịnụ.
Nkebi nke 3: Naghachi ehichapụ iPhone kọntaktị site na iCloud ndabere
Prekondishion: Ị kwadoo gị iPhone na iCloud n'ihu gị-efu ndị kọntaktị. Gịnị gị mkpa: iCloud
E nwere ụzọ abụọ n'ihi na ị na-agbake kọntaktị site na gị iCloud ndabere: jikota ya na gị na iPhone ma ọ bụ weghachi ya na gị na iPhone.
Jikota iCloud kọntaktsị na gị iPhone: Gaa Ntọala <iCloud. Abanye na gị Apple ID ma gbanyụọ ihe nke Ndi ana-akpo. Mgbe ahụ-atụgharị ya na ma họrọ jikota na mmapụta ozi. Mgbe ahụ kọntaktị niile na iCloud ndabere bụ azụ gị iPhone.
Weghachi iCloud ndabere gị iPhone: N'ụzọ dị otú a, ị chọrọ ka gị iPhone dị ka a ngwaọrụ ọhụrụ site na ịga na Ntọala <General <Tọgharia <Ihichapu ọdịnaya niile na Mwube, na mgbe ahụ họrọ ihichapu iPhone na mmapụta ozi. Mgbe ọ na-malitegharia, ị nwere ike họrọ Weghachi si iCloud ndabere.
O doro anya na, akpa ụzọ ukwuu tụrụ aro. Ọ bụrụ na e nwere n'ezie pụrụ iche mere na ị gaghị eme ya site merging ụzọ, nke abụọ ụzọ ka nwere ike ịbụ otu nhọrọ.
Otu ihe otú: naghachi naanị kọntaktị site na iCloud ndabere
Wondershare Dr.Fone Maka iOS na-ahapụ gị wepụ iCloud nkwado ndabere na mpaghara selectively naghachi ọ bụla ị chọrọ site na ya, nke mere na ị na-adịghị mkpa iji weghachi dum ndabere na tọgharịa gị iPhone. Ọ bụrụ na ị chọrọ nwere a na-agbalị, ị nwere ike ibudata ikpe mbipute na-agbalị ya site onwe gị. Ọ na-ewe gị a nkeji ole na ole.
Nzọụkwụ nke selectively agbake kọntaktị site na iCloud ndabere
Banye iCloud akaụntụ
Mbụ nke ihe ịrịba ama na gị iCloud akaụntụ, nke mere na online ndabere nwere ike Ewepụtara mgbe e mesịrị.
Download na wepụ
Mgbe na na, họrọ nkwado ndabere na mpaghara ịchọrọ ibudata ma wepụ ya na 2 clicks.
Mgbe iṅomi akwụsị, ị nwere ike ịhụchalụ na naghachi ihe ọ bụla ihe ị chọrọ n'aka ndabere.
Ihe banyere Wondershare Dr.Fone maka iOS:
Bara uru Atụmatụ maka syncing na Google kọntaktsị na gị iPhone
N'ihi na iOS 7 na iOS 8 ọrụ, ị pụrụ ịgbaso na-akwụsị n'okpuru ka mmekọrịta kọntaktị gị na Google Ndi ana-akpo:
1. pịa Ntọala> Mail, Ndi ana-akpo, kalenda> Tinye Akaụntụ> Google.
2. Tinye ozi achọrọ na n'ubi.
3. Jide n'aka Ndi ana-akpo bụ on.
N'ihi na iOS 5 ma ọ bụ iOS 6 ọrụ, ị nwere ike melite kọntaktị syncing na Google Ndi ana-akpo site na-eso nzọụkwụ:
1. pịa Ntọala> Mail, Ndi ana-akpo, kalenda> Tinye Akaụntụ ...> Ndị ọzọ> Tinye CardDAV Akaụntụ.
2. Tinye ndị na-esonụ ọmụma na ubi:
* aha njirimara: gị zuru Google email adreesị
* Password: gị Google akaụntụ paswọọdụ
3. Enweta abia na n'elu nke ihuenyo mezue ntọlite.
Mgbe ị dechara ntọlite, na-emeghe Ndi ana-akpo ngwa na ngwaọrụ gị. Syncing ga na-amalite na-akpaghị aka.
> Resource> iPhone> Olee naghachi Lost ma ọ bụ ehichapụ iPhone Ndi ana-akpo